Epistulas - Latin - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: epistulas (Latin - Birman)
ငါရောက်လာသောအခါ၊ သင်တို့အလိုရှိသော သူတို့ကို ငါသည် လက်မှတ်စာပေး၍၊ သင်တို့လှူသော အလှူကို ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပို့စိမ့်သောငှါ စေလွှတ်မည်။
ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်မရှိ၍ စာ၌ပါသော စကားအားဖြင့်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက် ရှိသောအခါ အမှုအားဖြင့် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထိုသူသည် ဆင်ခြင်သိမှတ်စေ။
ထိုဘာသာဝင်သော ယောက်ျားမိန်းမ တို့ကို တွေ့လျှင်၊ ချည်နှောင်၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပို့ဆောင် ရမည်အကြောင်း၊ ဒမာသတ်မြို့၌ ရှိသော တရားစရပ်မှူး တို့ထံသို့ မှာစာကိုပေးပါဟု ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းထံ၌ ဝင်၍ တောင်းပြီးမှ၊
ထိုကဲ့သို့ပင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမှစ၍ လူအကြီးအကဲအပေါင်းတို့သည်လည်း အကျွန်ုပ်သည် ညီအစ်ကိုတို့ထံသိမှာစာကို ခံပြီးမှ၊ ဒမာသက်မြို့၌ရှိသော ထိုဘာသာဝင်သူတို့ကို ဒဏ်ခံစေခြင်းငှါ ချည်နှောင်၍ ယေရုရှလင် မြို့သို့ပို့မည်ဟု ဒမာသက်မြို့သို့အကျွန်ုပ်သွားပါ၏။
ထိုမှတပါး အခြားသော တိုင်းနိုင်ငံဘုရားတို့ သည်၊ မိမိလူများကို ငါ့လက်မှ မကယ်မလွှတ်နိုင်သည် နည်းတူ၊ ဟေဇကိကိုးကွယ်သော ဘုရားသည်၊ သူ၏ လူများကို ငါ့လက်မှ မကယ်မလွှတ်ရဟုဣသရေလအမျိုး ၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်သော စာကို ရေး၍ ပေးလိုက်သေး၏။
လူတိုင်း မိမိအိမ်ကို အုပ်စိုးရမည်အကြောင်း၊ မိမိလူမျိုးစကားကို ပြောရမည်အကြောင်း၊ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည် ဘာသာစကား အသီးအသီးကို အနက်ပြန် ၍ နိုင်ငံတော်အရပ်ရပ်သို့ အမိန့်တော်စာကို ပေးလိုက် တော်မူ၏။
desi सेक्सी वीडियो bf (Anglais>Hindi)सेक्सी पिक्चर! (Hindi>Indonésien)ando con mi tía en la tienda (Anglais>Espagnol)apestan (Espagnol>Chinois (simplifié))vocabit (Latin>Anglais)resolviera (Espagnol>Anglais)ngiyakuthanda mama wami (Zoulou>Anglais)¿cuándo ellos caminanala biblioteca? (Espagnol>Anglais)jevle go (Anglais>Hindi)weaver (Turc>Indonésien)alatque incendia (Latin>Anglais)fyn (Anglais>Gallois)koliko imate godina? (Croate>Anglais)pojedinačna (Serbe>Bulgare)como se escribe ingles en catalan (Catalan>Espagnol)ire (Latin>Français)no, per niente (Italien>Anglais)ब्लू सेक्सी जानवर (Hindi>Anglais)pinay kantutan six scandal (Tagalog>Anglais)beautiful couple of the world (Anglais>Hindi)cheirolophus (Français>Anglais)oedipus the king tagalog version (Anglais>Tagalog)in adversa ultra adversa (Latin>Italien)bangku (Malais>Anglais)8 36 (Anglais>Espagnol)